Companylọ ọrụ Ford Motor na -asọpụrụ BorgWarner site na onyinye nturu ugo kacha mma n'ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Companylọ ọrụ Ford Motor na -asọpụrụ BorgWarner site na onyinye nturu ugo kacha mma n'ụwa
BorgWarner, onye ndu ngwaahịa zuru ụwa ọnụ na-ebuga ihe ngwọta ngagharị ọhụrụ na nke na-adigide maka ahịa ụgbọ ala, ka amatala dị ka onye na-eweta ngwaahịa zuru ụwa ọnụ na 23rd Ford World Excellence Awards. A mara ọkwa BorgWarner ka onye mmeri Mepụta ga-enwerịrị ngwaahịa taa na mmemme mebere ụlọ ọrụ Ford moto.
BorgWarner, onye ndu ngwaahịa zuru ụwa ọnụ na-ebuga ihe ngwọta ngagharị ọhụụ na nke na-adigide maka ahịa ụgbọ ala, ka amatala dị ka onye na-eweta ngwaahịa zuru ụwa ọnụ na 23.rd Ford World Excellence Awards kwa afọ. A mara ọkwa BorgWarner ka onye mmeri Mepụta ga-enwerịrị ngwaahịa taa na mmemme mebere ụlọ ọrụ Ford moto.
Frédéric Lissalde, onye isi oche na onye isi oche, BorgWarner Inc kwuru, "A na-asọpụrụ anyị ịnata onyinye nturu ugo nke World Excellence maka Battery Electric Vehicle Integrated Drive Module site n'aka ndị ahịa anyị ogologo oge Ford," ka Frédéric Lissalde, onyeisi oche na CEO, BorgWarner Inc kwuru. na-etinye n'ịhụ na teknụzụ anyị dị ọcha ma dị mma bụ nke kachasị mma ma gboo mkpa ngagharị nke ugbu a na ọdịnihu.
"Ford Motor Company's World Excellence Awards na-amata ndị na-ebubata anyị na-arụ ọrụ nke ọma gburugburu ụwa maka inye aka weta atụmatụ Ford+ na ndụ," Hau Thai-Tang, onye isi ikpo okwu na onye ọrụ ọrụ kwuru. "Ndị na-eweta ihe dị ka BorgWarner bụ isi ihe na-eme ka Ford na-aga n'ihu na-aga n'ihu ka anyị na-etinye ike na ntọala iji wuo ike ọhụrụ na ime ka ahụmahụ ndị ahịa dịkwuo mma."
A na-amata ndị na-asọpụrụ maka ị nweta ọkwa kachasị elu nke ịma mma zuru ụwa ọnụ na ngalaba gụnyere:
Ngosipụta ihe nrịba ama nke mbụ - Na-emeso ndị ahịa dị ka ezinụlọ, tụgharịa ọrụ ụgbọ ala ma na-asọ mpi dị ka onye na-ama aka, mepụta ngwaahịa ga-enwerịrị.
Onyinye dị iche iche na nsonye maka ndị na-ebubata ihe na-eme nke ọma n'itinye ihe dị iche iche na nhazi na usoro azụmahịa ha.
Onyinye nkwado maka ndị na-ebubata ihe na-eme ka gburugburu azụmahịa dịkwuo mma
Onyinye ọla edo na ọla ọcha maka saịtị ndị na-ebubata ngwaahịa na-egosipụta ịdị mma, nnyefe na arụmọrụ dị elu n'ime afọ.